Archive du 20180814
Fifidianana filoha Misoko miadana indray ny « ni…ni »
Ny taona 2013 dia ny fianakaviambe iraisampirenena no loharanon’ny fanakanana ireo mpifanandrina politika mivantana 2 lahy, Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana, tsy handray anjara tamin’ny firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena.
Hajo Andrianainarivelo Hampandany an-dRajoelina
Hanohana an’i Andry Rajoelina ny Antoko Malagasy Miara-Miainga na ny MMM Tarihin’ny filoha nasionaliny Hajo Andrianainarivelo, araka ny fanambarana ofisialy nataony omaly teny amin’ny Hotely Ibis eny Ankorondrano.
Kandida zokiny indrindra Hanatitra antontan-taratasy anio
Tsy nihemotra tamin’ny fanapahan-keviny ny kandida ho filoham-pirenena, Solo Norbert Andriamorasata, izay heverina ho zokiny indrindra hatreto amin’ireo kandida rehetra.
Depiote Jaovato Manana olana amin’ny Banky
Velon-taraina ny depioten’Antalaha Laisoa Jean Pierre na Jaovato satria tsy mety miara-miasa aminy ireo banky misy eto Madagasikara, na ireo banky lehibe io na ny banky amin’ny resaka fampiasam-bola madinika.
Virapin Ramamonjisoa “Mendrika hanohy ny asa Rajao”
Mijoro ary hijoro hiaro ny zava-bita tato anatin`ny dimy taona isika, hoy i Virapin Ramamonjisoa, anisan’ny mitarika ny vovonana Voromahery (Vovonana miaro sy manohana an’i Hery Rajaonarimampianina).
HVM Lasa antoko tsy misy lohany
Nangingina sy tsy hita izay akon’ny Kongresy nataon’ny antoko HVM tany Antsiranana ny 10-11 aogositra lasa teo.
Hakana volana propagandy Robaina an-kolaka ny orinasam-panjakana…
Tsy misy tohiny mandrak’androny ny mikasika ny tohin’ny raharaha fanesorana ny tale jeneralin’ny orinasam-panjakana Kraomita Malagasy Arsène Rakotoarisoa.
Kung-fu Wisa Haneho ny heriny eny Mahamasina
Ana hetsiny ny mpikambana miangaly ny haiady Kung-Fu Wisa amin’izao, izay mielipatrana manerana ny nosy satria ireo toerana heverina ho lavitr’andriana aza ahitana izany.
Lalandy Andriamitosy Mangataka ny hijeren’ny HCC ireo mpitondra nanodinkodim-bola
Tonga nanatitra taratasy fitoriana sy tolo-kevitra teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana Ambohidahy omaly i Lalandy Andriamitosy, kandida amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena hotontosaina ny 7 novambra ho avy izao.
Ankazomanga sy Maroarivo Betioky Atsimo Mbola manantena fatratra ny Prezida Marc Ravalomanana
Mitohy foana ny fitetezam-paritra ataon’Atoa SAZALAHY Tsianihy filohan’ny Distim Atsimo Andrefana ny Faritany hiadidiany ka tany amin’ny kaominin’Ankazomanga sy Maroarivo ao amin’ny distrikan’i Betioky-Atsimo indray izy ny 08 sy 09 ary 10 aogositra 2018 lasa teo.
Basket – Tournoi Andao Hilalao 2018 Etsy Mahamasina ny 11 aogositra-07 septambra
Ny lalao basket-ball Open lahy sy vavy nanasana ny fiangonana samihafa “zokiny sy zandriny” eto Antananarivo sy ny manodidina toy ny avy eny Ivato sy Sabotsy Namehana no nanombohana ny hetsika Andao Hilalao 2018 ahitana basikety,
Volley-ball Analamanga Ekipan’ny GNVB 6 be izao no hiatrika famaranana
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina tamin’ny sabotsy 11 sy alahady 12 aogositra teo ireo lalao ankatoky ny famaranana rehetra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga
« Foot à 7 Tournoi ASTAFIM » Lasan’ny Taureau Namontana ny omby mifahy
Ny lalao famaranana ho an’ny sokajy U 20 notontosaina tamin’ny alahady 12 aogositra 2018 teny amin’ny kianja Kmfb Ankadivory kaominina Ampanefy no namarana tanteraka ny “Tournoi Foot à 7”
Ankizy mpianatra miisa 550 hanala ny fanadinana CEPE 2018 anio talata 14 aogositra avy ao amin’ny boriborintany faha-6 eny
Tany tan-dalàna inona intsony e ?
Herinandro eo sisa dia hifarana tanteraka ny fe-potoana handraisana ny antontan-taratasin’ireo kandida ho filoham-pirenena.
Fanadinana CEPE Ho hentitra ny fitandroana ny filaminana
Ho hentitra ny fitandroana ny fandriampahalemana amin’ny fiatrehana ny fanadinana CEPE anio talata 14 aogositra manerana ny Nosy. Raha
Fifaninanana manamboatra Robot Tonga any Mexico omaly ireo tanora Malagasy 5 mirahalahy
Ny sabotsy lasa teo no niainga teto an-tanindrazana hihazo an’i Mexico ireo tanora Malagasy dimy mirahalahy ahitana an’i Milà, Toky, Tojo, Kevin ary Lalaina kapitenin’ny ekipa hiatrika ilay fifaninanana manamboatra Robot.
Fanafihana taksibrosy tamin’ny RN4 8 voasambotra niaraka tamin’ny ody gasy
Voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny olona 8 ahiana ho nahavanona ny fanafihana taksibrosy tany amin’ny lalam-pirenena faha-4 (RN4 PK 160) ny alin’ny sabotsy teo.
Nankatoavin’ny HCC ihany ny lalàna momba ny ZES na ny faritra ara-toekarena manokana, lalàna izay niadivan’ny mpitolona teny amin’ny 13 mey mafy ny hanafoanana azy.
Tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara Zaza malagasy 1 amin’ny 2 no lasibatra
Nosokafana omaly alatsinainy 13 aogositra tetsy amin’ny Hotely Le Pave Antaninarenina ny fanombohana ny fankalazana ny herinandro nasionalin’ny fampinonoan-dreny eto Madagasikara.
Lalan’ny atody eny Mahitsy Novatsian’ny sinoa vola 30 tapitrisa dolara
Natomboka omaly ny asa fanamboarana ny « Route des œufs » na lalan’ny atody.
Fiatrehana ny fahavaratra Hohamafisina ny fampiasana Drône
Notontosaina omaly tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo ny atrikasa Iraisampirenena ho fanamafisana ny fampiasana ireo voangorivy na « Drône »